မျောက်ကျောက်ရောဂါက နောင်တွင် အလွန်ပျံ့နှံ့သွားနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း WHO ပြောကြား - Xinhua News Agency
ဂျနီဗာ ၊ မေ ၂၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မျောက်ကျောက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားလေ့မရှိသောနိုင်ငံများတွင် စောင့်ကြည့်မှုများ တိုးချဲ့နေသည့်အတွက် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ ပိုမိုဖော်ထုတ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း(WHO)က မေ ၂၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။WHO ၏ အချက်အလက်များအရ မေ ၂၁ ရက်အထိ မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားလေ့မရှိသောအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၂ နိုင်ငံမှ မျောက်ကျောက်ရောဂါ အတည်ပြုလူနာ ၉၂ ဦး ၊ သံသယလူနာ ၂၈ ဦး တွေ့ရှိကြောင်း သတင်းပေးပို့ချက်ရရှိခဲ့ပြီး ထိုနေ့အထိ ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သေဆုံးသူ မရှိ သေးကြောင်း သိရသည်။အတည်ပြု/သံသယလူနာများကို ဗြိတိန် ၊ စပိန် နှင့် ပေါ်တူဂီနိုင်ငံတို့မှ အများဆုံး တွေ့ရှိရပြီး ကျန်သည့်နိုင်ငံများမှာ ဩစတြေးလျ ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ ၊ ကနေဒါ ၊ ပြင်သစ် ၊ ဂျာမနီ ၊ အီတလီ ၊ နယ်သာလန် ၊ ဆွီဒင် နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ရှိ ဆေးရုံတစ်ခု၌ လူနာတင်ယာဉ်များအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ် ၂၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ယခုအထိ တွေ့ရှိရသောရောဂါဖြစ်ပွားသူများမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားလေ့ရှိသောနေရာများသို့ ခရီးသွားလာမှုများ မရှိကြောင်း နှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများသည် အခြေခံစောင့်ရှောက်မှု နှင့် လိင်ရောဂါကုသရေး ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများတွင် စောင့်ရှောက်မှု ခံယူနေရသည့် အမျိုးသားလိင်တူဆက်ဆံသူ(MSM)တို့တွင် အထူးသီးသန့် ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိရခြင်း မရှိသော်လည်း အများအားဖြင့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း WHO က ပြောကြားခဲ့သည်။
PCR ဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည့် လူနာအားလုံး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများသည် အနောက်အာဖရိကမျိုးအုပ်စုဝင် နှင့်အတူ ကူးစက်ခံရသကဲ့သို့ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံရှိ အတည်ပြုလူနာတစ်ဦးထံမှ နှာခေါင်းတို့ဖတ်နမူနာတစ်ခုသည် မျိုးဗီဇအစီအစဉ်တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်များက နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှ ဗြိတိန် ၊ အစ္စရေး နှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံများသို့ ရောဂါကူးစက်ခဲ့သော လက်ရှိရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ဖြစ်စေသည့် မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်၏ ထပ်တူနီးပါးတစ်ပုံစံတည်းအား ညွှန်ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရရှိထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များအရ လူမှလူသို့ ကူးစက်ခြင်းသည် ရောဂါလက္ခဏာရှိသော လူနာများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်ထိတွေ့သူများကြားထဲတွင် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ Heathrow လေဆိပ်အတွင်း ခရီးသည်များအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ် ၁၈ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ထပ်မံပျံ့နှံ့မှုများ ရပ်တန့်စေရန်အတွက် တိကျသေချာသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ မျောက်ကျောက်ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ချေ အမြင့်ဆုံးရှိသူများအား သတင်းပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်သင့်ကြောင်း WHO က ပြောကြားခဲ့သည်။
တွေ့ရလေ့ရှိသော မျောက်ကျောက်ရောဂါသည် ပထဝီဝင်ရှုထောင့်အရ ပုံမှန်အားဖြင့် အနောက် နှင့် ဗဟိုအာဖရိကတွင်း ဖြစ်ပွားကြောင်း ကန့်သတ်ထားသည်။ နိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ ရောဂါဖြစ်ပွားလေ့ရှိသောနေရာများသို့ ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိဘဲ မျောက်ကျောက်ရောဂါ အတည်ပြု/သံသယလူနာ၏ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားရွေးထုတ်ခြင်းသည် တစ်မူထူးခြားကြောင်း WHO က ပြောကြားခဲ့သည်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါအကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်မှု မြင့်မားစေရန် ၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ရှာဖွေတွေ့ရှိချက် နှင့် သီးသန့်ထားခြင်း( အထောက်အကူပေးသော စောင့်ရှောက်ပြုစုမှုပေးခြင်း)အား လုပ်ဆောင်ရန် ၊ ထပ်မံကူးစက်နေမှုများအား ကန့်သတ်ရန် အဆက်အသွယ်ခြေရာခံခြင်း နှင့် အထောက်အပံ့ပေးသော စောင့်ရှောက်ပြုစုမှုများအတွက် နိုင်ငံများအား အရေးပေါ်ပန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ ကျောက်ကြီးရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုသည် မျောက်ကျောက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ကျောက်ကြီးရောဂါ ကင်းစင်ခြင်းအား WHO က ကြေညာခဲ့သော်လည်း ကျောက်ကြီးရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းမှတစ်ဆင့် ရောစပ်အကာအကွယ်ပေးသော ကိုယ်ခံစွမ်းအားသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် အကန့်အသတ်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားလေ့မရှိသောနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်ကြသည့် ငယ်ရွယ်သူများအကြား မျောက်ကျောက်ရောဂါ ကိုယ်ခံအား အနည်းငယ်သာ ရှိကြောင်း ဆိုသည်။ (Xinhua)
GENEVA, May 22 (Xinhua) — The World Health Organization (WHO) said on Saturday that there will be more monkeypox cases identified as surveillance expands in non-endemic countries.
WHO’s data show that as of Saturday, 92 confirmed cases and 28 suspected cases of monkeypox have been reported from 12 member states that are not endemic for monkeypox virus, with no associated deaths to date.
However, as WHO declared the eradication of smallpox in 1980, cross-protective immunity from smallpox vaccination will be limited to older persons, and there is little immunity to monkeypox among younger people living in non-endemic countries since the virus has not been present there. ■
Photo 1 – Photo taken on March 30, 2021 shows an exterior view of the World Health Organization (WHO) headquarters in Geneva, Switzerland. (Xinhua/Chen Junxia)
Photo2– Ambulances are seen inahospital in London, Britain, March 27, 2022. (Xinhua/Li Ying)
Photo3– Passengers walk in Heathrow Airport in London, Britain, March 18, 2022. (Xinhua/Li Ying)